Arsenal oo u dhaqaaqeysa saxiixa Jose Mourinho si uu ugu noqdo bedelka ee Unai Emery – Gool FM
Arsenal oo u dhaqaaqeysa saxiixa Jose Mourinho si uu ugu noqdo bedelka ee Unai Emery
(London) 03 Nof 2019. Kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, si uu ugu noqdo bedelka Tababarahooda Unai Emery.
Maamulka kooxda reer London ee Gunners ayaa waxay bilaabeen inay su’aal ka keenaan awooda uu Unai Emery ku sii wadan karo shaqada kooxda, iyadoo ay suurtogal noqon karto inay go’aansadaan inay ceyriyaan xilliyada soo socota, waxayna taasi badelkeeda doonayaan inay la soo saxiixdaan macalin aan caadi aheyn.
Jose Mourinho ayaa qibrad sare u leh shaqada tababarka ee horyaalka Premier League, maadaama uu tababare u soo noqday kooxaha waaweyn ee Manchester United iyo Chelsea, waxaana uu kula soo guuleystay koobab badan.
Wargeyska “The Times” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in saraakiisha kooxda Arsenal ay durbaba isku diyaarinayaan inay badelaan tababarahooda, waxayna raadinayaan macalin qibrad sare u leh horyaalka Premier League, kaasoo dib u nooleyn kara shaqsiyada kooxda, isla markaana gaari kara natiijooyin wanaagsan dhamaan tartamada kala duwan.
Wargeyskan ayaa sheegay in Agaasimaha ciyaaraha kooxda Arsenal ee Raul Sanllehi uu kulan la qaatay Jose Mourinho, si uu kala hadlo suurtogalnimada uu ku qaban karo shaqada tababarka Gunners.
Wargayska The Times ayaa sheegay in maamulka Arsenal ay fursad kama dambeys ah u siiyeen Unai Emery laba kulan, si uu wax kaga badelo xaalada ay haatan kooxda ku jirto, kaddib natiijooyinka aan wanaagsanayn oo ay la kulantay xilliyadii lasoo dhaafay.
“Wali waan ka fogahay bahalnimada Ronaldo iyo Messi” – Sadio Mané